कसरी मेनिनजाइटिस, serous, purulent, फंगल छ? किन डराउनु?
मेनिनजाइटिस विपरीत कि, ती रोगहरु मध्ये एक छ भाइरल hepatitis व्यक्ति या एचआईभी संक्रमित व्यक्ति सिधै एकदमै गाह्रो छ। मानिस दुवै र पशु र संभावित को meninges एक सुनिंनु पैदा गर्न सक्छ कि भाइरस केही कीरा vectors को सेवा गर्न सक्छन् संक्रमण स्रोत को भूमिका मा। प्रत्यक्ष सम्पर्क मा मेनिनजाइटिस केवल एक मामला मा विकास गर्न सक्छन्: जब यो अर्थात् meningococcus, एक जीवाणु कारण छ। गरेको मेनिनजाइटिस प्रत्येक मामलामा प्रसारित कसरी हेरौं
के रोग गराउँछ?
यो मेटर को इन्जेशन द्वारा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ:
3) च्याउ को;
4) unicellular रोगजनक;
5) मिश्रित संक्रमण।
को मेटर हिट गर्न मा, microorganism विशिष्ट संरचना, बलियो aggressiveness छ या उसलाई मस्तिष्क आसपास सबै सुरक्षा पर्खाल मार्फत जान अनुमति हुनेछ जो एक व्यक्ति, एक मात्रा मा प्राप्त गर्नुपर्छ। साथै, रोग विकसित गरेको छ गर्न, मानव शरीर कमजोर वा अल्पविकसित प्रतिरक्षा प्रणाली या त हुनुपर्छ (किन बच्चाहरु वयस्क भन्दा बिरामी प्राय जो छ)। मेनिनजाइटिस मस्तिष्क गर्न असामान्य रगत आपूर्ति गर्नेहरूलाई विकास बढी सम्भावना छ, कुनै पनि उमेर मा जन्म, वा स्ट्रोक समयमा hypoxia भोगे।
डाटा रोगजनकों रूपमा मस्तिष्क को अस्तर भित्र पस्नु?
भाइरस प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ:
- साझा खिलौने को प्रयोगको माध्यमबाट;
- जब unboiled पानी, दूध वा अन्य उत्पादनहरू प्रयोग;
- चुम्बन - एक व्यक्ति बिरामी सार्स (मेनिनजाइटिस पैदा गर्न सक्छ भाइरस द्वारा सुनेपछि) हुँदा; उहाँले herpes एक exacerbation थाले; उहाँले mononucleosis र चिकन pox पीडित छ;
- कीरा वा कण को बाइट्स मार्फत।
सिद्धिएको - यो, प्रश्न "? दुवै प्रसारित serous मेनिनजाइटिस" भनेर जस्तो थियो। तर त्यहाँ एउटा छ "तर": वास्तवमा, धेरै गाह्रो बिरामी प्राप्त गर्न भाइरल सुनिंनु को एक निदान भएका विरामीहरु संग सम्पर्क मा meninges को। आफ्नो परिवार मा कसैले बच्चा, पुरुष वा महिला, (हो) छ जो केही दिन, त तपाईं एक भाइरल रोग जस्तै विकास हुन्छ भनी एउटा ठूलो मौका पछि अस्पताल "serous मेनिनजाइटिस भाइरल" को एक निदान संग दाखिल भएको थियो संग सम्पर्क थियो भने कि, छ, तर मेनिनजाइटिस छैन। एउटै मेनिनजाइटिस चेचक - जो चेचक विकास, मेनिनजाइटिस अर्को बच्चा कुराकानी बगैंचामा एक बच्चा, चेचक संग बिरामी र एकदम सानो हुन एउटा ठूलो मौका छ।
भाइरल मेनिनजाइटिस को फैलने अक्सर जो जहाँ सक्रिय भाइरस नजिक टोली वा परिवार, र खाना को खपत संग मान्छे को सम्पर्क सम्बद्ध छैनन् (यो अक्सर बस पानी वा दूध उसिनेर छ)।
मेनिनजाइटिस जीवाणुहरु कसरी कारण छ?
Purulent मेनिनजाइटिस गर्न सक्छन् भने "क्याच" अपर्याप्त वा राम्ररी यस्तो व्यवहार रोगहरु जीवाणुहरु कारण, otitis, sinusitis, rhinitis, pharyngitis, गलसुआशोथ, निमोनिया, septicemia जस्तै। रोग घाउ cranial वा स्पाइनल नहर मर्मज्ञ पनि हुन्छ। यसलाई - एक उलझन वयस्क मा निरन्तर रूपमा विकास गरेको दोस्रो मेनिनजाइटिस, purulent मेनिनजाइटिस सबै अवस्थामा लगभग 90% छ।
मात्र मेनिनजाइटिस, जो साँच्चै, ड्रम थोपाहरूबा प्रसारित छ - एक वार्ता मेनिंगोकोक्सल मेनिन्जाइटिस। यो रोग ठीक मेनिनजाइटिस विरामीहरु देखि मेनिनजाइटिस रूपमा प्रसारित गर्न सकिँदैन (भाइरल कारण मा रुचि छैन: एक भाइरल पखाला संग बिरामी छ - यो दोस्रो मेनिनजाइटिस हुन्छ)। यो रोग तिनीहरूले बिरामी तिनीहरूले कम परिपक्व प्रतिरक्षा प्रणाली छ रूपमा, बच्चाहरु प्राय प्राप्त, प्राथमिक छ। मा संक्रमण, वार्ता मेनिंगोकोक्सल मेनिन्जाइटिस संक्रमण छोराछोरीको टोलीमा छोराछोरी संक्रामक फैलने सक्छ को एक; बारम्बार अवस्थामा, जब परिवारमा सबै बच्चाहरु यस रोग संक्रमित हुन्छन्।
रोग meningococcus कसरी कारण छ?
मेनिनजाइटिस प्रसारित छ ड्रम थोपाहरूद्वारा। संक्रमण स्रोत बच्चा वा वयस्क जो हुन सक्छ:
- यो जीवाणु गर्दा यो चिन्ता थिएन, यो nasopharynx छ, र यो उदार बिरामी महसुस छैन, छोटो दूरीमा बढी ब्याकटेरिया "टाढा दिने" (अर्थात् - नजिक सम्पर्क माध्यम);
- वार्ता मेनिंगोकोक्सल मेनिन्जाइटिस nasopharyngitis (लक्षण समावेश कम शरीर को तापमान, दुखाइ, बेचैनी वा दुखेको घाँटी, muco-purulent छुट्टी नाक बाट);
- वार्ता मेनिंगोकोक्सल मेनिन्जाइटिस रोग को सामान्यिकृत फारम: मेनिनजाइटिस वा meningococcemia; एक गाढा रंग छ र ग्लास, यो रोग को छैन एक अनिवार्य लक्षण थिचिएको गर्दा गायब छैन जो दाना।
यो जीवाणु नजिक दूरी मा ड्रम थोपाहरूबा प्रसारित छ चाँडै हावा मा मर्छ। त्यो अक्सर बन्द टोली (बाल सदन वा स्कूल) वा छोराछोरीलाई परिवारमा केटाकेटीलाई संक्रमित।
मेनिनजाइटिस च्याउ कसरी कारण छ?
मेनिनजाइटिस यस प्रकारको सरुवा छैन। यो प्रतिरक्षा (जन्मजात, प्राप्त एचआईभी संक्रमण) संग एक ठूलो समस्या गर्नेहरूलाई मा मुख्य रूप हुन्छ, वा रगत विकार। कम सामान्यतः, यो गर्न सक्नुहुन्छ केमोथेरापी वा विकिरण चिकित्सा पछि "प्राप्त"।
तपाईं मेनिनजाइटिस करार डराउँछन् भने के गर्ने?
बच्चा किंडरगार्टन जान्छ अघि meningococcus र pneumococcus विरुद्ध खोप हुन। साथै, देखि भाइरल मेनिनजाइटिस Vaccinations सुरक्षा।
स्वच्छता को आधारभूत नियमहरू पालन र पर्याप्त गर्मी उपचार उत्पादनहरु सञ्चालन गर्छन्।
, Temperaturyaschih संग कुराकानी छैन coughing र मानिसहरूले sneezing (तिनीहरूले हुन सक्छ जो परिवार) gauze वा डिस्पोजेबल मास्क बिना; यो बच्चा गर्न accustom।
तपाईं पहेंलो छुट्टी संग घाँटी मा बेचैनी वा "प्रकाश" रूघाँ, चिन्तित हुनुहुन्छ भने, यो रोग को वार्ता मेनिंगोकोक्सल मेनिन्जाइटिस प्रकृति को बहिष्करण मा LORu र संक्रामक रोगहरु बुझाउँछ।
प्रतिरक्षा प्रणाली उछाल, स्वस्थ जीवन शैली बलियो बनाउँछ।
multivitamins पिउन गर्न offseason मा योजना, हाम्रो क्षेत्र मा हुर्केका थप तरकारी र फलफूल खान प्रयास गर्नुहोस्।
एक विशेष रोग बारेमा निर्धारित चिकित्सक प्रदर्शन।
अब तपाईं मेनिनजाइटिस कसरी प्रसारित छ थाहा छ। उनको स्वास्थ्य गर्न ध्यान हुन।
Discolored मूत्र - एक स्वास्थ्य समस्या?
कारण र proctitis को लक्षण
एक गद्य कविता आई एस Turgeneva (विश्लेषण)। "स्पैरो" Turgenev - के हामी यो काम सिक्न सक्छौं?
पंख कसरी डाउनलोड गर्ने?
Waterproofing पावलले आफ्नै हातले के
Alexy, मास्को र सबै रूस कुलपिता: आफ्नो जीवनको जीवनी, फोटो
कसरी लामो र कहाँ परिवर्तन तपाईं नाम INN परिवर्तन गर्दा